Igwu Nits | All mkpa ka ị mara
Enye The buut Iji Igwu Nits
Igwu na a na-enwekarị nsogbu na ọtụtụ ndị na-eche ihu dịkarịa ala otu ugboro, abụkarị mgbe ha na-eto eto. Ndị a nje ndị ọzọ na-ebi na ntutu isi na pụrụ ịdị ndụ n'ebe ezi a mgbe ma ọ bụrụ na ha na-agaghị na-ewepụ. A ọma ọgwụgwọ dị mkpa iji jide n'aka na ọ bụla ikpeazụ Chọpụta nke nits e kpochapụla, ma ọ bụ ndị nits ga na-abịa azụ. Na-esonụ usoro ga-ewepụ Igwu nits na-eme ka ntutu isi ọcha ọzọ.
tupu nits ike-ewepụ si n'isi, ha ga-akpa-aghọ unstuck. Igwu edebe ha nits na mgbọrọgwụ nke ntutu isi n'ihi na ọ bụ ezigbo ebe maka nits na-eto eto n'ime okenye Igwu. Nke a na ebe bụ nke dịkarịrị nso na ahịa ala isi, ya mere, ọ bụ na-ekpo ọkụ na ooh-ezu maka nits. A ngwakọta nke mmanya na mmiri ga igbari mama na Igwu iji jide nits na ebe, na-eme ka ọ dịrị ya mfe iji wepụ ha. Atọ n'akụkụ nke a ise asaa percent ịta nke mmanya isii n'akụkụ mmiri ga-eme ọrụ. Nweta ngwakọta miri n'ime ahịa ala isi na niile ntutu.
Ozugbo mmanya na mmiri ngwakọta nke tọpụ ndị nits, rachighaa ha na a ígwè Igwu mbo. Ime nke a n'okpuru a ìhè nke kacha visibiliti. Kewaa ntutu n'ime mkpa ngalaba na mbo, malite n'elu. Mgbe ọ bụla combing, ebe ahụ mbo na a ngwọta nke na-ekpo ọkụ na mmiri na mmanya ka tufuo ọ bụla nits na Igwu na anakọtara na ya. Ka ngalaba nke ntutu isi na-dechara, ma ikpa isi na ntutu isi ma ọ bụ iji a clip na eriri ya ọnụ na-Igwu si na-akpụ akpụ n'elu ngalaba na ama na e mere.
Combing si nits na Igwu nwere ike na-ewe ọtụtụ awa, karịsịa ma ọ bụrụ na ntutu isi bụ ogologo. ozugbo mere, enye ntutu a asacha na a nile ma ọ bụ medicated ncha ntutu. The Igwu ka nwere ohere na-agbasa, otú iji mmiri ọkụ na-asa ọ bụla uwe a na-eyi n'oge mwepụ, akwa nhicha, na Igwu mbo. Gaa n'elu ihicha ebe na a agụụ Cleaner inu elu ọ bụla Igwu na nits na ike gbapụta. Ndị ọzọ na-na-abịa na kọntaktị na nit na Igwu jupụtara ntutu nwere ike ha, otú ijide n'aka na-elele ha ntutu kwa.
scarves, okpu, uwe, Ohiri isi, na bed Ibé akwụkwọ ga na-asa na mmiri ọkụ, ma ọ bụ dị ka onye ọzọ, enịm ke ntụ uko akpa na oyi kpọnwụrụ n'ihi na a ụbọchị igbu Igwu. Ngwá ụlọ na carpets nwere ike kpochara Igwu, ma ebe ndị a na-adịghị karịsịa ezigbo maka nlanarị nke Igwu na ha nits, ya mere, ha ga-anwụ mara mma ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha na-ekpe na ha.
Nke a mwepụ ọgwụgwọ ga-mere ọzọ n'ime ụbọchị asaa iji gbochie ọ bụla Agbaghara nits si na-eke ihe Igwu na ntutu isi na-eme ka ihe ka njọ. Ugboro abụọ na otu izu bụ ezigbo. Ọ bụrụ na chọrọ, ntutu nwekwara ike mkpirikpi iji gbochie ihe Igwu na nits si abịa. Ebe ọ bụ na Igwu ga-enweghị ebe na-ezo ezo na ihe ọ bụla na-arapara ha nits on, ha ga-ibugharịa na a kwesịrị ekwesị karị nwa akwukwo.
All nke combing na saa niile ga-abụ ọnụ ahịa ya mgbe Igwu nits na-akpatre arahụ. Ọ bụ ezie na o nwere ike ịbụ ihere nwere ndị a pests, ma ọ bụrụ na kwesịrị ekwesị usoro a na-eme, ha ga na-enwe a ihe gara aga.